> Resource > iPad > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka iPad
Dhaco tirtiray videos ka iPad oo aad rabto inaad iyaga soo ceshano? Ha welwelin. Waxaa jira xal. Maqaalkani waxa uu u socdo si uu idiin tuso laba siyaabood inuu ka soo kabsado tirtiray videos ka iPad, si toos ah iskaan oo ka soo kabsado aad iPad iyo Macdan aad Lugood raad raac ah oo iPad in ay dib u soo ceshano tirtiray videos. Labada siyaabo waxaa la samayn karaa in 5 daqiiqo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery). Waxba ma ahan wixii aad computer-lever yahay, inaad taas qaban karaa oo keliya oo aan wax dhibaato ah.
Waa maxay Wondershare Dr.Fone ee macruufka samayn kartaa:
iPad Air, iPad mini bandhigay isha, iPad mini, iPad bandhigay isha, The iPad cusub, iPad 2/1
iPod xiriiri 5/4
Content Text, Xiriirada, Messages (SMS, iMessages & MMS, oo ay ku jiraan Emoji), wac taariikhda, Calendar, Notes, wada hadalka WhatsApp, waano, Safari bookmark
Content Media: Camera Roll (Photo & Video), Photo Library, Photo Stream, lifaaqyada Message, Voice Deymaha maqan, farriinta, lifaaqyada WhatsApp
Wonderhare Dr.Fone ee macruufka taageeraa oo dhan lagu daydo ee iPad. Just download version maxkamad free hoose si aad u leeyihiin isku day la walwal lahayn.
2 Siyaabaha inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka iPad
Qeybta 1: dib u soo ceshano tirtiray iPad videos by saaro Lugood ee kaabta
Qeybta 2: Si toos ah Ladnaansho tirtiray Videos on iPad
Qeybta 1: dib u soo ceshano tirtiray iPad videos by saaro kaabta Lugood
Haddii aad synced aad iPad la Lugood ka hor, waxaad u soo ceshano karaa videos hore ka. Halkii ay ka soo celinta dhan Lugood gurmad faylka, Wondershare Dr.Fone ee macruufka kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro gurmad iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka, sida videos. Waxay noqon kartaa dhamaystiran laba talaabo. Just on akhriska iyo Raac tallaabooyinka hoose si aad u yeeli jiray.
Tallaabada 1. Dooro iyo Macdan Lugood raad raac ah oo aad iPad
Orod barnaamijka on your computer iyo dooran hab kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado Lugood ee kaabta File . Markaasaa Lugood gurmad files jira on your computer si toos ah laga heli doonaa oo soo bandhigay idinka soo hor jeedda. Waxaad mid ka mid ah si aad u iPad dooran kartaa sida magaca ka mid ah qalabka, haddii ay jiraan wax ka badan hal gurmad file muuqday. Markaas iskaan si ay u soo saaro adigoo gujinaya badhanka Start Scan.
Tallaabada 2. Check oo soo kabsado lumay videos on your iPad
Ma aha oo kaliya xogta ku jirta galka gurmad ah, laakiin sidoo kale xogta si aad u tirtiray ka iPad ka hor syncing la Lugood la raadsan kartaa file u gurmad. Scan ka dib, waxaad eegi kartaa xogta soo saaro natiijada scan ee ay barnaamijka. Markaas videos waxaad eegi kartaa ka qaybta ah Roll Camera. Sax shayga aad rabto in aad guji badhanka uu soo kabsan u badbaadin on your computer.
Download version maxkamad of this iPad software kabashada video u leedahay in isku day ah hadda!
Tallaabada 1. Isku aad iPad oo iskaan
Currently, Wondershare Dr.Fone ee macruufka kaa caawin karaan oo kaliya in ay dib u soo ceshano tirtiray videos si toos ah uga iPad 1. tusaalayaal kale oo ah iPad, waxaa ka heli kartaa oo kaliya videos jira on your iPad, ma aha mid la tirtiro. Haddii aad rabto in aad mid ka mid ah la tirtiro, waxaad isku dayi kartaa habka ugu horeysay ee kor ku xusan si aad u hubiso in aad gurmad Lugood.
Haddii aad isticmaasho iPad 1, xerto computer la cable USB ah. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose marka iPad la aqoonsan yahay. Raac sharaxaad ku saabsan suuqa kala inuu soo galo hab iskaanka qalabka ay u iskaan videos tirtiray waxa on. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa hage hoos ku qoran:
1. Click on the Start button on suuqa kala barnaamijka si ay u bilaabaan.
2. Marka aad bilowdo, riix Home iyo badhamada Power on your iPad waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
3. Ka dib markii in, waxaad sii daayo karaa batoonka sida uu ogeysiiska barnaamijka, laakiin sii riixaya badhanka Home for anther 10 ilbiriqsi, ilaa aad ku wargeliyay in aad ku soo gashay hab iskaanka si guul leh. Markaas barnaamijka bilaabmin falanqeeyo aad iPad, oo baar ka dib.
Tallaabada 2. recoverable videos on your iPad
Marka iskaanka waa dhameystiran, waxaad eegi kartaa xogta recoverable in natiijada scan. Wixii videos, waxaad iyaga ka hubin kartaa in ku giringiriya Camera. Waxaad calaameysaa waxyaabaha aad rabto iyo guji Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Download version maxkamad free hoose si aad u siin isku day ah oo ku saabsan iPad!